“Tichavawana” | Bhuku Regore ra2015
“Rimwe Zuva Tichavawana”
Munenge muna 1935, murume anonzi Pablo González, aiva munharaunda inonzi Cibao Valley, akatanga kuverenga Bhaibheri. Akambowadzana kwenguva duku neimwe chechi yakabuda muRoma, asi akazoisiya aona kuti maitiro evanhu vacho aisaenderana nezvaakanga averenga muMagwaro. Zvisinei, akaramba achidzidza Shoko raMwari ari ega uye akatanga kuudza vamwe zvaaidzidza. Akatanga nevemumhuri make nevavakidzani ndokuzoparidzirawo vamwe vemunzvimbo dzaiva pedyo. Akatengesa purazi nemombe dzake kuti awane mari yekushandisa pakufamba achishumira.
Muna 1942, Pablo akanga ava kushanyira mhuri 200 kana kupfuura munzvimbo dzakapoteredza, achigara achiitisa misangano kunyange zvazvo ainge asati amboonana neZvapupu zvaJehovha. Aikurudzira vanhu kuti vadzidze Bhaibheri uye kuti vararame maererano nezvarinotaura. Vakawanda vakabvuma zvaaitaura ndokurega kuputa fodya uye kuita barika.
Mumwe wevaiteerera mashoko eBhaibheri aiparidzwa naPablo ndiCeleste Rosario. Celeste anoti, “Pandaiva nemakore 17, imwe hanzvadzi yaamai vangu, Negro Jiménez, yaiva murimwe remapoka aitungamirirwa naPablo González. Negro akashanyira mhuri yedu ndokutiverengera magwaro kubva muBhaibheri. Kubva ipapo ndakabva ndasiya chechi yeRoma yandaimbopinda. Zvataiverengerwa kuchechi taisazvinzwisisa nekuti zvaiva muchiLatin. Pasina nguva refu, Pablo González akatishanyira ndokutikurudzira. Akati: ‘Hatisi vechitendero chero chipi zvacho pane zvatinoziva, asi tine hama dzedu dziri pasi rose. Hatisati taziva kuti ndivanaani kana kuti vanoshevedzwa nezita rokutii, asi rimwe zuva tichavawana.’”
Pablo akanga aumba mapoka evadzidzi veBhaibheri mumataundi eLos Cacaos Salcedo, Monte Adentro, Villa Tenares, uye guta reSalcedo. Muna 1948, paakaburuka bhazi muSantiago kuti akwire rimwe, akaona Zvapupu zvaiparidzira mumugwagwa uye zvakamupa Nharireyomurindi. Paakaita rwumwe rwendo, Pablo akapiwa mabhuku maviri neimwe hanzvadzi ichibva yamukoka kuChirangaridzo cherufu rwaKristu muSantiago. Akanakidzwa chaizvo nezvaakanzwa paChirangaridzo ichocho zvekuti akagumisa kuti ainge azowana chokwadi uye kuti vanhu vaiva pamusangano iwoyo ndivo vaaitarisira kuti rimwe zuva achavawana.
Mamishinari acho akashanyira vaya vaidzidza Bhaibheri naPablo. Pane imwe nzvimbo yaisanganira Pablo neboka rake, paiva nevanhu vakuru 27 vainge vakamirira nemufaro. Vamwe vaivapo vainge vafamba makiromita 25 netsoka; vamwe vainge vafamba makiromita 50 nemabhiza! Pane imwezve nzvimbo paiva nevanhu 78, uye pane imwe paiva ne69 vakanga vauya kuzopinda musangano.
Pablo akapa mamishinari mazita anosvika 150 evanhu vaifarira chokwadi. Vanhu ava vaizvininipisa uye vaida chokwadi vakanga vava kutodzidza Bhaibheri vachiita zvarinotaura. Chavaingoda chete kutungamirirwa kuti vaite zvinhu zvakanyatsorongeka. “Mamishinari akatishanyira tikaita musangano,” anodaro Celeste. “Urongwa hwakaitwa kuti vanhu vabhabhatidzwe. Ndini ndakava wekutanga kubhabhatidzwa mumhuri medu. Pave paya, amai vangu, Fidelia Jiménez, uye munin’ina wangu, Carmen vakazobhabhatidzwawo.”
Gungano redunhu rekutanga remuDominican Republic, iro rakaitirwa muSantiago musi wa23 kusvika 25 September 1949, rakaita kuti basa rekuparidza riwedzere. Vakawanda vaiva nechido chokuziva vakauya, zvikaita kuti pave nevanosvika 260 vakateerera hurukuro yavose musi weSvondo. Vanhu 28 vakabhabhatidzwa. Gungano iri remazuva matatu rakaita kuti vatsva vakawanda vagutsikane kuti iri ndiro sangano raishandiswa naMwari kuzadzisa zvinangwa zvake.
Mamishinari anonzi Lennart naVirginia Johnson anosvika
Kushanya kwaHama Knorr naHama Franz
Gungano redunhu rekutanga
Vanhu 28 vakabhabhatidzwa muRwizi rwaNorth Yaque
Zvapupu zvaJehovha zvakabhanwa